Accueil > Gazetin'ny nosy > Federasiona Kick Boxing: Mpikarama an’ady no lasa filohany ?
Federasiona Kick Boxing: Mpikarama an’ady no lasa filohany ?
Ny talata teo no notontosaina tetsy amin’ny lapan’ny kolotsaina sy ny fanatanjahan-tena etsy Mahamasina ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona malagasy amin’ny haiady Kick Boxing. I Mamindraibe Rasolotafika no nahazo ny safidin’ny rehetra tao, izay tsy hafa fa ireo avy amin’ny ligy isa-paritra. Efa nampoizina, hoy ny mpanara-maso, ny fahalanian’i Mamindraibe Rasolotafika, izay fantatra ny maro amin’ny hoe « Mamy Be ». Izy izany no handimby toerana an’i Brian Andrianirina.
Fa ny tsy azo ikombonam-bava momba an’ity filoha vaovaon’ny Kick Boxing ity dia ny fahafantaran’ny maro azy amin’ny fikaramana an’ady. Tsy mifidy sehatra izy fa rehefa misy mifanaraka aminy ka vola no tambiny, dia tsy omeny lamosina, hoy ny fanampim-baovao.
Teo amin’ny herisetra pôlitika aloha dia nalaza tao Fianarantsoa ny anarany tamin’ireny fandrobana ny fitaovana sy fandoroana ny foiben’ny haino aman-jery Viva tamin’ny taona 2015 ireny. Tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna tao Fianarantsoa koa dia re fa niasa mafy tamin’ny fomba rehetra, eny hatramin’ny fampiasana be sandry (gros bras) ho fampihorohoroana ny mpifaninana tamin’ny kandidan’ny Hvm tao an-tampon-tanànan’ity renivohitra ny Betsileo ity izy.
Tsy zoviana amin’ny ao Fianarantsoa tokoa i Mamy Be, ary ny fandraharahana vato no ataony amin’izao fotoana ka mahatonga azy ho isan’ny mpanambola, hoy ihany ny akom-baovao.
Maro ny herisetra miendrika heloka be vava ahafantaran’ny mponina maro ao Fianarantsoa an’i Mamy Be, saingy lasa filohan’ny Federasiona malagasy amin’ny haiady Kick Boxing moa izy ankehitriny, ka mety ho lasa « olona madio mangatsakatsaka toy ny volon’ondry fotsy » koa.